तिथि मेरो पत्रु » पुरुष महिला जाओ लागि चार प्रकार
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 21 2020 |3मिनेट पढ्न
एक मानिसको मनमा चाबी आफ्नो पेट माध्यम छैन. यो आफ्नो मनमा छ. मनोविज्ञान र अवलोकन को प्रयोग तपाईं आफ्नो सपना को मानिस जीत र एक अल्पकालीन रोमान्स वा आजीवन आनन्द नेतृत्व गर्न सक्छन्. तपाईं आफ्नो जीवन मा यस बिंदु मा लागि देख रहे हो. उनको व्यक्तित्व चिन्न र के तिनीहरूलाई टिकटिक बनाउँछ महत्वपूर्ण छ र तिनीहरूको हृदयमा दृढ ठाउँ मा तपाईं सक्छ. तल mens चार प्रकार छ’ व्यक्तित्व र त्यस मानिसले तपाइँको गर्न सक्छौं.
चिसो मान्छे आफ्नो जीवन मा मान्छे को एक धेरै अप्ठ्यारो गर्ने मान्छे को प्रकार छ. कसैसित भएको जो एक प्रतिवेश छ जस्तै यो प्रकारको हुन सक्छ. त्यसैले फलतः तपाईं आफ्नो संसारमा pecking क्रम तल हुन सक्छ. स्वरूप चिसो मान्छे महत्वपूर्ण छन्. उहाँले पहिरनलाई नवीनतम रुझानों छ वा उहाँले सबै कहिलेकाहीं निर्धक्क भई सुन्दर मान्छे चल्छ एक विरोधी-फैशन रुख लिन्छ र कहिलेकाहीं अति-विश्वस्त मा लेखक सक्छौं. एक सुन्दर मान्छे आकर्षणको केन्द्र हुन रुचि र तपाईं त उहाँलाई upstage उहाँलाई ध्यान छ गरौं गर्न चाहनुहुन्छ छैन. कूल अन्य सुन्दर मान्छे र केटी जस्तै मान्छे र सुन्दर मान्छे संग घेर त तपाईं यदि nerdy विशेषताहरु उसले सजिलै आफ्नो जीवनमा तपाईं छैन गर्न वहन गर्न सक्दैन भनेर तपाईं प्रेममा यति नभएसम्म आफ्नो कम्पनी मा प्रदर्शन गर्न प्रयास र निश्चित आफ्नो मित्रहरुलाई अगाडि प्रदर्शन छैन! कूल लडकों तिनीहरूले अन्य जातिहरूका लिन किनभने भन्दा भन्दा आफ्नो मित्रहरुलाई अधिक सुन्न गर्छन’ अनुहार गुमाउन छैन ताकि आफ्नै न्याय मा सुसमाचार रूपमा राय.
उच्च भौंह Bloke
उच्च ब्रो मान्छे सधैं एक सूट मा शायद dapper र देखिने मान्छे को प्रकार छ. उहाँले संगीत मा अस्पष्ट विषयमा कुरा गर्न अप्ठ्यारो, साहित्य, आदि … तर यी क्षेत्रमा अस्पष्ट कुराको बढी विलक्षण तत्व रुचि मा veers कहिल्यै. उनि एकदम उचित हो या कम से कम कि तिनीहरूले देखिने के हो किनभने यो छ: बौद्धिक र उचित. चिसो मित्र जस्तै
प्रदर्शनमा उच्च ब्रो bloke गर्न अत्यावश्यक छन्. मानिसको यस प्रकार पनि एक दंभपूर्ण तत्व हुन त्यहाँ अप्ठ्यारो. वास्तविकता टी वी र जस्तै उहाँलाई समय को बर्बादी हो. तपाईं आफ्नो अस्पष्ट ज्ञान मा ब्रश र एकदम परिष्कृत र शिष्ट लुगा लगाउन आवश्यक हुनेछ जस्तै एक मान्छे संग प्राप्त गर्न. तर प्रक्रिया मा दंभपूर्ण बन्न गर्दिनँ. एक snob आफैलाई भएको बिना एक snob केटासित गर्न सक्छन् सम्झना. उच्च ब्रो bloke संग विचार गर्न अर्को तत्व बाहिर खाने छ. उहाँले सस्तो खाना वा MacDonalds संग एक क्याफे मरेका पकडा हुनेछ. यो शायद तपाईं उहाँसित मा समाप्त हुनेछ अधिक एउटा होटेल वा पल्ट तपस हुनेछ.
केटा-अर्को-ढोका आफ्नो सफा-कटौती छ, गुलियो मान्छे. उहाँले पिउन तर यो ज्यादा रुचि र उहाँले धेरै मूलधारको संगीत मन अप्ठ्यारो, टिभी, आदि … केटा-अर्को-ढोका बारेमा गलत धारणा सायद असत्य छ जो सबै मिठास र प्रकाश हुन्छ. तिनीहरूले तपाईंलाई अचम्म सक्छ. तिनीहरूले मात्र निजी तिमीहरूलाई देखाउने त्यहाँ एक शरारती पक्ष शायद छ. आशा गरौं आफ्नो खातिर बेडरूम मा! तिनीहरू स्वयं होस् र तिनीहरूले छन् तर उनीहरूले आफ्नो सुरक्षित छवि पछि लुकाइरहेको र डोमेन आफ्नो वास्तविक आत्म बाहिर अनुमति छै. यो एक आत्म त्यहाँ बाहिर जान गाह्रो छ रूपमा यो आफ्नै गतिमा गरिनु पर्छ किनभने तर पनि कडा धक्का छैन.
यस Nerdy मानिस
यस nerd अस्पष्ट कुराहरू धेरै थाह को अर्थमा उच्च ब्रो bloke समान छ. यो nerd शो को लागि कुरा रुचि वा तिनीहरू कत्ति बौद्धिक देखाउन विरोध तिनीहरूले मन के मन अप्ठ्यारो तथापि. अनि अक्सर ती अस्पष्ट कुराहरू सबै आलीशान र उचित छैन. यस nerd धेरै साँचो छ र प्रदर्शनमा सबै महत्त्वपूर्ण छैनन्. Whovians गर्न hippies गर्न rockers देखि nerds विभिन्न प्रकारका छ (डाक्टर कसले प्रशंसक) र विज्ञान-fi प्रशंसक. तिनीहरूले धेरै रोचक मानिसहरू हुन् तर मानिसहरू एक साधारण धारणा छ जो nerds रोमान्स को लागि लागिपरेको हुन् जस्तो लाग्छ किनभने अक्सर मा पारित गर्दै. Nerds अरू कसैलाई रूप picky हो र एक साथी मा राम्रो कुराकानी पाउन प्रेम. अक्सर nerds विगतमा तल राखे गरिएको छ किनभने nerd गर्न दिक्क हुन त्यहाँ अप्ठ्यारो. विभिन्न कथित कुनै को त गाह्रो हुन सक्छ भरोसा को एक बिन्दु पा सहे लागि एक धेरै छ गर्छ. सामान्यतया nerds तिनीहरूले आफैलाई भएको आराम गर्दै छन् किनभने अन्य nerds केटासित गर्छन तर तपाईं प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं खुला झुकाउ यस एक रोचक परिएला, मजा, कोमल र सुन्दर सम्बन्ध.
5 कुराहरू तपाईं एक पहिलो तारीख मा बारे मा कुरा हुँदैन
एक नाश छ? यहाँ कसरी थाहा छ